July 2019 - Page 4 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
July 8, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta oo Isniin ah safarkiisii ugu horeeyay ku yimid deegaanada Puntland tan iyo markii la magacaabay. Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ergayga ku […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland President Said Abdullahi Deni sacked the director general of the ministry of finance Abdirizak Mohamed Hassan, who has been in office for several years. Faisal Abdullahi Warsame was appointed as the new […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xilka ka qaaday agaasimaha wasaaradda maaliyada Cabdirisaaq Maxamed Xasan kaasoo muddo dheer joogay xafiiska. Faysal Cabdullaahi Warsame ayaa loo magacaabay agaasimaha cusub ee wasaaradda maaliyada Puntland, sida […]
July 7, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa uga digtay dowladda federaalka Soomaaliya in ay wax farogelin ah ku samayso doorashooyinka Jubbaland iyo Galmudug. Bayaan maanta oo Axad ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland ayaa lagu […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Mid kamid ah hoggaamiyaasha ugu waa-weyn ee burcadbadeeda Soomaaliya Maxamed Garfanje ayaa ka badbaaday weerar gaadmo ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo deegaanka ah. Weerarka ayaa Sabtidii ka dhacay meel u dhow degmo xeebeedka […]
July 6, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyaha cusub ee ciidamada Puntland Janaraal Yaasiin Cumar Dheere ayaa Jimcadii booqday ciidamada qalabka sida ee Puntland ee ku sugan jiida deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Waxa uu sheegay in booqashadu ahayd salaan […]
July 4, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka Guinea, sida uu sheegay wasiirka arrimada dibada. Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimada dibada Soomaaliya, oo maanta oo Khamiis ah jir jaraaid ku qabtay Muqdisho […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay toogasho ku fulisay afar nin oo ay ku eedaysay in ay ahaayeen basaasiin. Sida ay daabacday warbaahinta taageerta Al-Shabaab, nimanka la toogtay ayay maleeshiyadu ku eedaysay in […]
July 3, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Arbaco ah kormeer ku sameeyay ciidamada Daraawiishta Puntland ee ku sugan xerada 54-aad ee duleedka magaalada Garoowe. Saraakiil ciidan oo hore oo uu kamidyahay […]
July 2, 2019 Puntland Mirror 0
The United States is resuming some assistance to a unit of the Somali military that is not working directly with U.S. forces, U.S. officials said on Tuesday, around 18 months after aid was suspended to […]